xil ka qaadis lagu sameeyay Gudoomiyihii Gobolkaasi C/qaadir Maxamed Nuur Siidii. – STAR FM SOMALIA
xil ka qaadis lagu sameeyay Gudoomiyihii Gobolkaasi C/qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Wararka laga helaayo Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay Gudoomiyihii Gobolkaasi C/qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ee Somalia Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxaa lagu shaaciyay in Siidii lagu sameeyay Xil ka qaadis sharci ah.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa Siidii bedelkiisa Xilkaasi u magacaabay Ibraahim Aadan Cali oo uu sheegay inuu noqon doono Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Xaflada lagu magacaabaayay Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxaa ka maqnaa Gudoomiyaha Xilka laga qaaday C/qaadir Siidii.
Xil ka qaadista lagu sameeyay C/qaadir Siidii ayaa maalmahaani danbe aheyd mid laga hadal hayay inta badan Gobolka Shabelaha Hoose inkastoo aan la garaneynin waxa uu Siidii ka dhihi doono xil ka qaadistiisa maadaama uu goobta ka maqnaa.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa ka hadlay arinta xadka soomaaliya & kenya
Odayaal dhaqameedyo lagu dilay duleedka degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud